Sekubulawe 3 okhethweni lwaseKenya | isiZulu
Sekubulawe 3 okhethweni lwaseKenya
Kuboshwe umyeni ngokushona kukankosikazi
'Uqalwe ngamabomu' umlilo obulale 9 wezingane zesikole - Ungqongqoshe
Inkantolo inqume ukuba kuvotwe kabusha eKenya
Nairobi – Bathathau abantu asebedutshulwe babulawa ngoLwesine njengoba umbhikisho weqembu eliphikisayo uqubule udlame ngesikhathi kuvotwa kabusha eKenya, kusho imithombo esondelene namaphoyiseni nesibhedlela.
Owesilisa oyedwa ubulawelwe eMathare, eNairobi, okungenye yezindawo lapho ababhikishi bezame khona ukuvimbela ukuvota okhethweni oludutshwe ngumholi weqembu eliphikisayo uRaila Odinga, kwaba nokulizisana namaphoyisa.
"Ngisanda kuthola isiqiniseko sokuthi udutshulwe ekhanda,” kusho umqondisi waseDrugnet hospital, uDickens Osimba.
OLUNYE UDABA: Ivelile indoda eyabulala amadodakazi yalimaza umkayo
Isitatimende samaphoyisa esikhishwe ngu-Inspector general George Kinoti, sithe kudutshulwe kwabulawa omnunye umuntu entshonalanga yeHoma Bay "lapho khona iqeqebane Labantu lihlasele khona isikhungo samaphoyisa…amaphoyisa avulela ngenhlamvu ezivikela.
Phambilini imithombo esondelene namaphoyisa nesibhedlela ikuqinisekisile ukuthi kubulawe umfana oneminyaka engu-19 eKisumu.
Ukushona kwalaba kusho ukuthi sebengu-43 abantu asebebulewe kusukela ngokhetho lwango-Agasti 3, kanti iningi libulawe ngamaphoyisa.
Ukhetho lubanjwe kabusha kulandela ukuba iNkantolo eNkulu yaseKenya ichithe imiphumela yokhetho lwango-Agasti ngenxa yokungalandelwa kwemigomo efanele.
'Angikaze ngimebele uMugabe, naye angafakaza'
Isosha laseZimbabwe, elisolwa ngokweba ama-laptop angu-119 emzini kalowo owayengumengameli wezwe uRobert Mugabe, kubikwa ukuthi utshele inkantolo ukuthi izinto okuthiwa wazintshontsha wazinikezwa nguMugabe uqobo lwakhe.